Person: Arthur Mutambara
Tsvangirai promises a better future for Zimbabwe
New Zimbabwe prime minister Morgan Tsvangirai promised urgent change for his beleaguered country after being sworn into office by bitter rival Robert Mugabe today.
Opposition leader rejects call to share key ministry
African leaders urged Zimbabwe’s rival political factions to share control of the police ministry in an effort to form a unity government, but President Robert Mugabe’s main opponent early today rejected the proposal.
Delay adds fears over Zimbabwe power deal
Key parts of Zimbabwe’s power-sharing deal will not take effect for at least a month, it emerged today.
Opposition to get one cabinet seat more than Mugabe
ZIMBABWE’S opposition will get more cabinet posts than President Robert Mugabe’s party in the long-sought unity government, state radio has reported.
Mugabe in new round of power-sharing talks
Zimbabwe’s President Robert Mugabe and opposition leader Morgan Tsvangirai were today meeting in a fresh round of power-sharing talks.
Pressure mounts on Tsvangirai to agree power-sharing deal
Zimbabwe’s main opposition leader faced mounting pressure today to agree to a power-sharing government with President Robert Mugabe.
Zimbabwe talks stall amid deal rumours
Zimbabwe’s main opposition leader has quit power-sharing talks with president Robert Mugabe to consider a possible deal, it emerged today.
Mugabe 'to remain as president'
Robert Mugabe is to remain as president of Zimbabwe in a deal thrashed out in peace talks today.
State media: Mugabe to stay as Zimbabwe president
Reports from southern Africa suggest a breakthrough has been reached in peace talks over Zimbabwe that would allow Robert Mugabe to remain as president.
UK calls for tough action against Mugabe
The UK called for tough action in the face of Zimbabwean President Robert Mugabe’s defiance and signs of disunity among his opposition.
Zimbabwe police release Mugabe opposition
Police today finally freed nearly 200 people arrested last week in a raid on the Zimbabwe’s main opposition headquarters.
Mugabe opponents still held in jail
Police in Zimbabwe were today still refusing to release almost 200 members of the main opposition party despite a court order.
Zimbabwe's opposition reunites and declares majority
Zimbabwe's divided opposition movement has formally reunited and is declaring that it has a majority in parliament.
Ballot rigging fears cast shadow over Zimbabwe polling day
Zimbabwe goes to the polls tomorrow amid hopes of a change from the ruinous rule of president Robert Mugabe and fears of vote rigging on a massive scale.
Mugabe opponents warn of votes fraud
Thousands of Zimbabweans flocked to closing election campaign rallies today as opposition hopefuls urged people to be on guard against any attempts at rigging by President Robert Mugabe.
Economy crisis piles pressure on Mugabe: Tsvangirai
Runaway inflation and the Zimbabwe dollar’s worst crash in memory will increase pressure on President Robert Mugabe to allow free and fair elections, the main opposition leader said.
Armed raiders rob Leixlip train station*
Gardai in Co Kildare are searching for two armed raiders who held up the railway station in Leixlip early this morning. The men, one of whom was armed with what appeared to be a handgun, entered the station at around 6am.